Global Voices teny Malagasy » Hitako nihaodihaody teny ianao ! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2019 13:33 GMT 1	 · Mpanoratra Manuel Ribeiro Nandika Liva Andriamanantena
Nihaodihaody teny ianao nandritra taona maro saingy tsy mba afaka niresaka taminao aho. Na dia nasaina aza aho kanefa noho ny antony samihafa dia tsy nitranga izany. Nandeha lalan-kafa aho, niditra tao amin'ny Demotix raha ny tsaroako. Efa akaiky ianao!
Zavatra maro no reko momba anao! Nanomboka namaky sy nijery anao avy lavitra aho, tao anaty aloka foana saingy nampiely ny “feonao” tamin'ny alàlan'ny tambajotra. Nampiseho ahy ny tontolo izay inoako ny vahoaka rehetra manome aingam-panahy anananao. Niara-naneho ireo fitaovana hiarovana ny rariny, ny fitoviana ary ny fahalalaham-pitenenana ianareo. Nahafantatra zavatra maro aho, noho ianao: Global Voices!
Nanatevin-daharana ilay fianakaviana aho ny 14 Oktobra rehefa afaka ireo taona rehetra ireo. Tamin'ny fotoana nankalazana ny faha-10 taonanao indrindra izany. Arahabaina nahatratra ny tsingerintaona nahaterahanao ianao!
Misaotra anao nandray ahy!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/20/140389/